Bit By Bit - Misa kubatsirana - 5.5.5 Iva anekutita
Zano kuti chemufungo chinoshanda zvose pakutsvakurudza mubhuku rino. Kuwedzera mamwemazwi nyaya kwetsika-muChitsauko 6 guru kutsigirana zvirongwa mutsai vamwe dzakananga nyaya yetsika, uye sezvo vakawanda kutsigirana ndiko saka itsva munzanga tsvakurudzo, zvinetso izvi arege pachena zvizere pakutanga.
In zvose vakawanda kutsigirana zvirongwa nyaya muripo uye zvikwereti zviri kunzwisisa. Somuenzaniso, vamwe vanhu vanofunga kuti unethical kuti zviuru zvevanhu akashanda kwemakore pamusoro Netflix Prize uye pakupedzisira kuwana muripo. Relatedly, vamwe vanhu vanofunga kuti unethical kubhadhara vashandi Micro-basa mumisika basa mari yakawanda chaizvo diki. A kwokupedzisira nyaya mbiri vanonzi mapepa. zvirongwa zvakasiyana tora nzira dzakasiyana, asi vamwe zvirongwa kupa vanonzi chikwereti nhengo dzose vakawanda kubatirapamwe; Somuenzaniso, chokupedzisira munyori rokutanga Foldit pepa raiva "Foldit vatambi" (Cooper et al. 2010) .
Open foni vakagovera date muunganidzwa kunogonawo kusimudza mibvunzo yakaoma pamusoro kubvumirana uye zvakavanzika. Somuenzaniso, Netflix akasunungura vatengi firimu ratings vose. Kunyange zvazvo firimu ratings irege kuonekwa nehanya, vanogona kuzivisa mashoko pamusoro vatengi 'enyika zvatinofarira kana zvepabonde, mashoko vatengi haana kubvumirana kuti voruzhinji. Netflix akaedza de-kuziva mashoko kuitira kuti ratings aisagona chokuita romumwe munhu upi zvake, asi chete mavhiki pashure kusunungurwa Netflix mashoko akanga zvishoma de-anonymized kubudikidza Narayanan and Shmatikov (2008) (ona Chitsauko 6). Uyezve, muna vakaparadzira mashoko muunganidzwa, vatsvakurudzi aigona kuunganidza mashoko pamusoro vanhu vasina zvavo mvumo. Somuenzaniso, muna Malawi Journals Projects, kukurukurirana pamusoro inonyatsoshanda nyaya (AIDS) vakanga transcribed pasina mvumo yemuridzi vechikamu. Hapana matambudziko aya chemufungo vari sezvisingakundiki, asi vanofanira munyaya magadzirirwo chehupenyu basa. Yeuka, wako "boka" rinoumbwa nevanhu.